10 November, 2018 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa suxufiyiinta gaar ahaan wardoonada Aqalka Cad ee dalkaasi looga arrimiyo diray digniino culus kuna eedeeyay in ay warbixino been abuur ah ka gudbiyaan maamulkiisa.
Iyadoo markii horeba Maaxweyne Trump uu qoonsanaayay warbaahinta ayaa waxaa xiisada sii xumeeyay falkii wariyaha muuq baahiyaha CNN warka kaga soo tabiya Aqalka Cad Jim Acosta lagala laabtay warqadaha ogolaashaha lagu soo gallo Aqalkaasi, kaib markii uu su’aal uu dhibsaday weydiiyay Maaxweyne Trump oo khudba jeedinaayay.
Mar uu madaxweyne Trump warbaahinta la hadlay shalay gelinkii dambe ayuu wariye Jim Acosta ku tilmaamay in uu yahay wariye aan xirfad duruqsan u lahayn saxaafada uuna ku xadgudbay qiyimka madaxweynaha maadaama uu I weydiiyay su’aal ay ka muuqatay kalsooni daro iyo xushmad la’aan mana aqbali doono in suxufiyiinta kale ee la amidka ah ee weli ka howlgalla Aqalka Cad in ay howshooda sii wataan ,hadlkaasi oo u muuqday in madaxweynuhu uu si qeyxam ugu goodinayo suxufiyiinta.
Durbadiiba qaar kamid ah suxuyiinta wararka kasoo tabiya Aqalka Looga arrimiyo Mareykanka ayaa si cad kaga soo horjeestay eedeymaha ah in xirfad badan aynan lahayn, kuna tilmaamay hadalka madaxweynaha iska hadal iyo digniin uu ku doonayo in uu afka ku qabto saxaafada xurta ah sida ay hadalka u dhigeen.
Kooxaha u dooda xuriyada hadalka ayaa durbadiiba dhaleeceeyay digniinaha madaxweynaha mareykanka Donald Trump uu u jeediyay Saxaafada balse Trump iyo maamulkiisuba uma muuqdaan kuwo maqlay baaqyada loo soo diray.
Trump iyo saxaafada waxaa ka dhaxeyso cadawtooyo soo jireen ah laga soo bilaawo markii kurisiga madaxtinimada dalkaasi loo dhaariyay oo ay saxaafadu sheegtay in si been abuur ah uu kusoo baxay kuna tilmaamay in uu yahay cunsuri waana halkaasi meesha ay Trump iyo saxaafada iska qoomsadeen.
Wixii intaas ka dambeysay way wada shaqeynayeen isaga iyo saxaafada oo danta ku qasabtay in ay la shaqqeeyaan balse xiriir xun ayaa kala dhaxeeyay.
Dagaal culus oo ka socda Degaanka Daynuunay